USA: Yaa ka dambeeya eedaha xiriirka Trump iyo Russia, maxaase ka jira? – Kasmo Newspaper
USA: Yaa ka dambeeya eedaha xiriirka Trump iyo Russia, maxaase ka jira?
Updated - January 12, 2017 7:37 pm GMT
Basaas Ingiriis ah oo lagu magacaabo Christopher Steele ayaa ka dambeeya warbixinta sida aadka ah loo hadal hayo ee ku saabsan xiriirka Donald Trump iyo Russia.
Warbixintaas oo sida uu caddeynayo ninka qoray muujinaysa kaalinta “Cremlin”ku ku leeyahay shirqool loogu talagalay waxyeellada Trump oo fara looga hayo isaga oo la tumanaya dumar Ruush ah, magaalada Moskow.
Kaas oo Huteelka “Riz Carlton Hotel”, oo sirdoonka Fsb ee Ruushku maamulaan, looga duubay, kameradaha iyo war-qabadka ugu dhaggan qol walba, isaga oo la wadaagaya, bandhig dhaqanxumo ah dumar an wanaagsanayn.
Steele oo hadda u kashifmay warbaahinta Maraykanka si aad ah ayuu u cabsanayaa, sida wargayska Times uu u sheegay nin si fiican u yaqaanna, wuxuuna ka baqayaa in sirdoonka Putin ama qaar kale u khaarajiyaan macluumaadka uu ogyahay darteed, sidii Litvinenko.
Christopher Steele waa 52 jir muddo dheer ka tirsanaa Sirdoonka Britain Mi6, wuxuuna 1990kii, si iskiis ah, basaasyo hore oo kale ula furtay Shirkad gaar ah oo ka tala bixisa arrimaha nabadgalyada.
Shirkaddiisa “Orbis Business Intelligence” waxay ku taallaa Grosvenor Gardens, bartamaha London, inta u dhexaysa Buckingham palace, Victoria Station iyo Xarunta Scotland Yard. Waxay kale oo leedahay shabakad Caalami ah oo xeeldheerayaal ah oo macaamiisha ka siiya talabixin istrateeji ah, iyo ababulidda ururinta wararka qarsoodiga ah.
Wuxuu sannadkii hore ka shaqeeyay hawlo noocaan oo kale ah, isaga oo ay qorteen xubno gudaha Xisbiga Jamhuuriga uga soo horjeeda Trump, markii dambana Xisbiga Dimuqraadiga qudhiisa ayaa u kiraystay, in uu u baaro xiriirka Trump la leeyahay Russia iyo Putin.
Ninkan oo horey uga soo shaqeeyay, isaga oo Mi6 ah, Safaaradda Britain ee Moskow, ka horna Paris iyo meelo kale, wuxuu arrimahan u leeyahay aqoon durugsan. John Sipher, sarkaal hore uga tirsanaa CIA ayaa wargayska SUN la wadaagay in Steele ahaa nin looga dambeeyay Dunida Sirdoonka, loona haysto in uu takhasus u leeyahay Russia.
Macluumaadka uu ka helay xiriirkiisa Sofiyeetigii hore waxay u gaysteen jug weyn oo ku xambaartay in uu faylka oo idil u gudbiyo FBI-da, kaas oo ku dambeeyay gacanta Bar Warbaahiinta Maraykanka ah, ilaa uu ka soo dhex butaacay, shirkii jaraa’id ee Trump qabtay 11kii Jenaayo.
Waxaana ka dhashay isku tuurtuur, buuq iyo beeneyn, Trump oo hay’adaha Nabadgalyada Maraykanka dusha ka saaray iyo iyaga oo iska fogeeyay.
Warbixinta oo ka kooban 35 bog, waxaa si gaar ah uga muuqata in Russia doonaysay in ay ku adeegatoTrump, iyada oo looga faa’ideysanayo, faraha laga hayo, shakigiisa badan iyo caadaadkiisa xun ee xagga galmada.
Warbaahinta Britain ayaa mugdi galinaysa nuxurka dokumentiga, iyaga oo muujinaya khaldaad xagga higgaadda ah oo ku saabsan magacyada dad Ruush ah oo an sax ahayn. Laakiin run iyo been, eedaha dokumentiga ku jira, mid ay noqotaba, ninkii qoray waa la la’yahay hadda, naftiisa ayuuna u baqayaa, gurigiisana waa ka maqanyahay (Sawirka).